Uncategorized – Page 2 – CYMRU
I-UFC kwi-ESPN + 32: I-Lewis vs Oleinik AmaSilamsi Ukubheja ukubuka kuqala, ii-Odds, iipick
No Comments on I-UFC kwi-ESPN + 32: I-Lewis vs Oleinik AmaSilamsi Ukubheja ukubuka kuqala, ii-Odds, iipick
NgoMgqibelo, umhla we-8 ka-Agasti, i-UFC izakube iphile qete kwiziko labo le-APEX le-UFC kwi-ESPN + 32: Lewis vs Oleinik. Phambi kokuba sijonge ikhadi eliphambili, siza kungena kwikhadi lokuqala lokulwa esilungiselelwe ukuqala nge-6PM ET kwi-ESPN +.
Eli nxalenye lomnyhadala libonisa ukungqubana kobuchule phakathi kweTim Means neLaureano Staropoli. Ukongeza, uKevin Holland uza kulwa kule mpelaveki emva kokuba ibreak yakhe ngokuchasene noTrevin Giles yarhoxiswa amaxesha ngaphambi komncintiswano ngoMgqibelo odlulileyo.
Kwikhadi lokuqala abo balwayo bayabonakala njengoNasrat Haqparast, uAndrea Sanchez, uGavin Tucker, kunye namathuba amaninzi.
Iisayithi zokubheja ze-UFC zikhuphe izinto ezingathandekiyo zenxalenye yamakhadi okuqala e-UFC kwi-ESPN + 32. Masingeneni ngaphakathi kwi-octagon yokubheja ukuze sivavanye ezi zinto zingathandekiyo, zichonge ixabiso okanye ziphakamise, kwaye senze ukuba oku kusengaphambili kuphume.
I-Irwin Rivera (-200)
Dlulile (-175) / Ngaphantsi (+155) kwimijikelo emi-2,5
U-Ali Al Qaisi wenza i-DC yakhe kwi-mpelaveki kule mpelaveki kwaye ungena kwi-octagon kumlo ophumeleleyo wokulwa wesihlanu. Ugqibe ukulwa ngo-Novemba kwaye waphumelela ngesigqibo. IAl Qasi ibingumlo wamanqindi weli nqanaba kude kube ngoku. Eli iya kuba linyathelo elikhulu eliya kukhuphiswano.
IAl Qasi iya kuba namancedo amabini ee-intshi kolu khuphiswano. Iintlanu zakhe ezisibhozo zephumelele iphumelele ngokuza kwindawo yokumisa kunye neendlela ezine zokungenisa. U-3-2 xa uhamba umgama.
URivera uza kwenza uhambo lwakhe lwesibini ngaphakathi kwi-octagon eyalwelwa okokugqibela ngoMeyi kwisaziso esifutshane. Wenyuka umgangatho weklasi kulomlo. Olu khuphiswano lweempelaveki luya kuba kwiklasi yakhe yesiqhelo. Ilahleko yakhokelela kwimfazwe yokuwina emithathu.
I-6 ye-9 ye-provera iphumelele i-pro winile nge-stoppage nge-TKO / KO. Ungu-3 ukuya ku-3 xa uhamba umgama.
Izinto ezingathandekiyo zithanda le mpi ihamba ngaphaya kwe-2,5 kwimijikelo (-175) kunye nesigqibo (-160). Kunzima ukuphikisana ngokuchasene noku. Ngokuqinisekileyo, sinokubona indawo yokumisa, kodwa ayicacanga ngokusekwe kwinqanaba letalente le-Al Qaisi.
Thatha imidlalo ekhuselekileyo apha kwaye uhambe nomlo ophela ngesigqibo. Ukusuka apho, thabatha uRivera ukususela walwa ukhuphiswano olunamandla.
Irwin Rivera vs Ali Al Qaisi –
Zingaphezu kwe-2,5 kwimijikelo (-175)
Umlo uhamba umgama (-160)
URivera uphumelela ngesigqibo (+158)
UPeter Barrett vs Youssef Zalal
UPeter Barrett (+360)
Dlulile (-155) / Ngaphantsi (+135) kwimijikelo emi-2,5
UPeter Barrett yeyona underdog enkulu kuyo yonke umcimbi we-UFC. Wafumana le ntlawulo ye-octagon ngokuphumelela kwi-DWCS kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. U-Barrett ngu-3-1 kumlo wakhe wokugqibela wokulwa kwaye wachitha i-chunk elungileyo yomsebenzi wakhe kwiCage Titans FC.
Ezisithoba kwi-11 yakhe ephumeleleyo iphumelele ngokuza kwindawo yokumisa ngezisixhenxe nge-TKO / KO. U-2-0 xa uhamba umgama.
I-Youssef Zalal yeyona nto ibheja kakhulu ayithandayo kwi-UFC kwi-ESPN + 32 njengoko esenza uhambo lwakhe lwe-3 ngaphakathi kwi-octagon. Ukuza kuthi ga ngoku, iZalal ihambile ngo-2-0 kwi-UFC kwaye iphumelele imfazwe emithathu ethe ngqo. Isixhenxe kwabaphumeleleyo abayi-9 abaphumeleleyo baphumelele ngendlela eyekiswayo. Ungu-2-2 xa umlo usiya kwisigqibo.
Igama elibizwa ngokuba “nguMtyholi weMoroccan,” I-Zalal inezibonelelo zokuma kwaye kufuneka ikwazi ukuthatha phantsi kuka-Barrett. Andiboni nayiphi na indlela eya eluthandweni lukaBarrett kwaye ndiyamangaliswa kukuba oku kungathandekiyo kule mpi iya ngaphaya kwe-2,5 imijikelezo (-155) nomgama ogcweleyo (-145).
Ndibona uBarrett njengenyathelo elisezantsi kukhuphiswano lweZalal kwaye andilindelanga ukuba eli dabi lokuya kwimijikelo emithathu epheleleyo. Umahluko kwinqanaba leetalente kufuneka uboniswe kule mpelaveki kwaye ndithatha iZalal ukuba iphumelele ngaphakathi kumgama ngendlela yokumiswa.
Peter Barrett vs Youssef Zalal –
Ngaphantsi kwemijikelezo eyi-2,5 (+135)
Umlo uphela ngaphakathi kumgama (+105)
I-Zalal iphumelela ngaphakathi kumgama (+155)
UJustin Jaynes vs Gavin Tucker
UJustin Jaynes (+115)
UGavin Tucker (-135)
Dlulile (-150) / Ngaphantsi (+130) iilali ezi-2,5
UJustin Jaynes uza kwenza uhambo lwakhe lwesibini ngaphakathi kwi-octagon kule mpelaveki ephumelele amatyala akhe ngoJuni nge-1K yomjikelo we-TKO. Uphumelele iimfazwe ezintlanu ezithe tye kwaye zonke zigqitywa kumjikelo wokuqala. Ukuphumelela kwakhe kuFrank Camacho kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo bekuyimizuzwana engama-41 kwaye kwamfumana ibhonasi yokulwa ebusuku.
I-13 ye-Jaynes ‘i-pro pro eziphumileyo ziye zafika ngokungasebenzi nge-TKO / KO. Ezili-12 kwezili-13 zokumisa kwakhe zingenile kumjikelo wokuqala. U-2-4 xa esiya kumgama.
Olu iya kuthatha uhambo lwe-4 kuTucker ngaphakathi kwi-octagon apho 2-1 ukuza kuthi ga ngoku. Wenza i-dut ebonakalayo kwi-2017, kodwa wabethwa kakubi kumlo wakhe wesibini. Phantse iminyaka emibini kamva, uTucker wayeza kubuyela kwi-UFC kwaye aphumelele ngokufaka umjikelo wesithathu ngokuchasene noSeung Woo Choi kunyaka ophelileyo.
Lo iya kuba ngumlo wesithathu kaTucker kwiminyaka emi-3 ½ edlulileyo. Ezisithoba kwi-11 yakhe ephumeleleyo iphumelele ngokuza ngokungqamene nesihlanu ngokuhambisa. 2-1 xa uhamba umgama.
Nokuba imile okanye ikwi-mat, i-Tucker ngokucacileyo ngumlobi ongcono opheleleyo ngokuthelekiswa neJaynes. Ngaphaya koko, iJaynes yehla isisindo ukuze ikhuphisane kolu khuphiswano lwe-featherweight. Ngokuqhelekileyo uJaynes ulwa ngo-155 ukuya ku-170.
Andikholwa ukuba uJaynes uza kuphumelela emva kokusika obu bunzima kwaye athathe umlo ongcono.
I-UFC kwi-ESPN + 32: I-Lewis vs Oleinik yeKhadi eliphambili lokubheja i-Odds kunye nePick I-TwitterFacebookMore
No Comments on I-UFC kwi-ESPN + 32: I-Lewis vs Oleinik yeKhadi eliphambili lokubheja i-Odds kunye nePick I-TwitterFacebookMore
NgoMgqibelo, nge-8 ka-Agasti, i-UFC iya kuba iphile qete ukusuka kwindawo yayo ye-APEX eLas Vegas ye-UFC kwi-ESPN + 32: Lewis vs Oleinik. Lo msitho waziwa ngokuba yi-UFC Vegas 6 kunye ne-UFC Fight Night 174. Inqaku liphezulu kumlo obunzima be-weightweight phakathi kukaDerrick Lewis kunye no-Aleksei Oleinik.
Ikhadi eliphambili linee-bout ezintlanu kubandakanya i-bout edityaniswe phakathi kuka-Omari Akhmedov noChris Weidman. Le nxalenye yomsitho icwangciselwe ukuba iqale nge-9PM ET kwi-ESPN +. Ikhadi lokuqala lokulwa liza kuqala kwi-6PM ET.
Iindawo zokubheja ze-UFC zikhuphe i-slate epheleleyo yeendlela zokubheja ezingafanelekanga zalo msitho. Masingene ngaphakathi kwi-octagon ukukhangela ezi-UFC kwi-ESPN + imikhwa engama-32, chonga naliphi na ixabiso okanye izinto ezixhalabisayo, kwaye sibambe uqikelelo ngokubheja njengedolo leJorge Masvidal.
I-Beneil Dariush vs Scott Holtzman
IBasili Dariush (-185)
Scott Holtzman (+160)
Dlulile (-115) / Ngaphantsi (-105) kwimijikelo emi-2,5
Kwintshatsheli engaphendulwanga u-Scott Holtzman, unethuba kule mpelaveki ukuba ajike iintloko ezithile enze inyathelo elikhulu lokuya kwi-Top 15 ngokuphumelela. UHoltzman uyi-5-1 kumlo wakhe wokugqibela omathandathu, i-7-3 kwi-UFC nakwimfazwe emibini yokuphumelela. Uphumelele ukhuphiswano ngoFebruwari kwaye wahlula uJim Miller ngesigqibo esingavumiyo.
Ukuphumelela kwakhe isixhenxe kwabali-14 abaphumeleleyo kuye kwangena indawo eyemahlanu ngeTKO / KO. Ungu-7-3 xa uhamba umgama.
Nge-Dashash Dariush, lo ayingengomlo wayefuna. Kwakufuneka ayicwangcise ngethemba lokuya phezulu kwizikhundla ezinobunzima bokufumana umzabalazo omkhulu ngexesha elizayo. Ubekwe kwindawo ye-14, uDariush wayezama ukukhusela omnye umphikisi oPhezulu abayi-15, kodwa akwabikho nto.
Nangona edanile, uDariush akajonganga kwiHoltzman edlulileyo. Uziva ngathi umchasi wakhe ulukhuni kwaye uyamhlonipha. Nangona kunjalo, uDariush ukholelwa ukuba uza kuphumelela eli dabi kwaye unokufumana indawo yokumisa endleleni:
“Ndinethuba elikhulu emhlabeni. Kodwa, koko ndikubonileyo ndikwanethuba lokubetha. Andingxami ukwenza enye into, isicwangciso sam somdlalo kukuze ukhululekile apho. Ayikaze igqitywe kwaye walwa abahle. Andiqondi ukuba ndingamhlisa kwaye ndimhambise kwangoko. Ndingaba sisidenge ukuba ndicinga loo nto. Inokuba iyafana kumlo wokulwa noDrakkar Klose kwaye isenokujika ibe sisiporho. Kufuneka ndiyilungele yonke loo nto. ”
Ukuphumelela kuka-Drakkar Klose ngo-Matshi kwakuyimpumelelo yesiteyitimenti njengoko uDariush ephumelele nge-2nd round knockout. Kwakuyimpumelelo yakhe ye-4 ngokulandelelana kwaye bumephule irekhodi lakhe le-UFC ukuya kwi-12-4-1. Ngaphezulu kweminyaka emibini ye-las, uDariush ungene kweyakhe kwaye uyimpi eyingozi kwicandelo.
I-12 kwi-18 yakhe ephumelele i-pro iphumelele ngendlela yokumisa kunye nesibhozo ngokuthumela. U-6-0-1 xa esiya kumjikelo amathathu opheleleyo.
Njengoko uDariush sele ekhankanyiwe, unakho ukuxhamla kuloo mat. Ukwi-intshi enye ende enendawo ezintathu zokufikelela.
Oku kuzakuba yimatchup echulumancisayo kuba iHoltzman ishukuma isantya esiphezulu kwaye inobushushu. Uqinile kwaye use mat, okuya kuba ngumceli mngeni kuDariush ukufumana ugqibe.
Ndiyakholelwa ukuba uDariush uza kuphumelela olu khuphiswano, kodwa iya kuba ngesigqibo (-110). I-10 yeembaleki zika-Holtzman ezili-17 zihambile. Akazange amiswe njengoko zonke ezintathu zelahleko zakhe zenziwa ngesigqibo. Ngapha koko, uDariush akakaze alahlekelwe sisigqibo kwiihambo ezisixhenxe kubagwebi.
Thatha imijikelezo eyi-2,5 (-115) kule. Umlo wokuqala kumjikelo wesithathu (-140) lukhetho olufanelekileyo ukuba awuziva ukhululekile ukuba uphumelele. Oku kulwa kuya kuseta ithoni kuyo yonke intshukumo yamakhadi aphambili. Ndiyakholelwa ukuba inakho ukufumana ibhaso lokulwa ebusuku.
Biliush Dariush vs Scott Holtzman –
Zingaphezu kwe-2,5 kwimijikelo (-115)
Umlo uhamba umgama (-110)
Ukulwa kuqala umjikelo 3 (-140
UDariush uphumelele ngesigqibo (+295)
UJulia Stoliarenko vs Yana Kunitskaya
UJulia Stoliarenko (+190)
U-Yana Kunitskaya (-230)
Dlulile (-190) / Ngaphantsi (+165) iilali ezi-2,5
Le bout yayicwangciselwe ukuba ibe nguKetlen Viera ngokuthelekisa uYana Kunitskaya. Nangona kunjalo, uViera wemka ngenxa yezizathu ezingachazwanga. Ngelishwa, loo matchup watyhalwa ngasemva nge-1 Agasti ukuya kule mpelaveki. Nangona kunjalo, uViera uye wemka kwiveki ephelileyo kwaye uStoliarenko ukhuphukile kwisaziso seveki.
U-Julia Stoliarenko ongabhaliswanga uya kumenza abuyele kwi-octagon okhuphiswano lokugqibela kwi-Ultimate Fighter 28 Finale. Ulahlekile ngobo busuku ngesigqibo sesahlukaniso. Ukususela ngoko, i-Lithuanian iphumelele ukhuphiswano oluhlanu ngqo.
Ezisibhozo zephumelele i-pro ephumeleleyo kungeniswe ngokuzithoba. U-1-1-2 xa uhamba umgama kumlo. UStoliarenko wagqibela ukungenela ukhuphiswano ngoMatshi kwaye waphumelela ngesigqibo sesahlukaniso e-Atticta FC.
I-8 yabekwa uYana Kunitskaya okokugqibela kukhuphiswano ngoDisemba kwaye ilahlekile nge-3rd round TKO to Aspen Ladd. Ilahleko yakhokelela kwimfazwe emibini yokuphumelela. U-2-2 ngaphakathi kwi-octagon. Zombini iilahleko zakhe zivela kukhuphiswano olunzima njengoko wabethwa nguCyborg kwibala lakhe le-UFC.
Isibhozo sempumelelo zakhe ezili-12 ziphumelele ngendlela eyema nge-TKO / KO. 4-1 xa uhamba umgama.
I-Kunitskaya ayenzi kakuhle ngokuchasene nabahlaseli abanolunya njengo-Lad noCyborg. Ngethamsanqa, inkcaso yakhe kule mpelaveki ayikho kweli nqanaba.
Kutheni iCraps inomntu oMihluliyo-Inzuzo kunye nentengiso I-TwitterFacebookMore
No Comments on Kutheni iCraps inomntu oMihluliyo-Inzuzo kunye nentengiso I-TwitterFacebookMore
Ndithetha ukuthini xa ndisithi i-craps inobuntu obahlulekileyo? Ndithetha ngezinto ezimbini ezahlukeneyo, nyani.
Eyokuqala yindawo yokudlala. Uninzi lwexesha, i-craps iyabonwabisa kwaye iyinto encinci. Ungomnye wemidlalo etshintsha iakhasino. Unokubheja ngeendlela ezininzi “ezisebenza” ngaxeshanye, zonke zinokuphulukana nomrhumo omnye wedayisi.
Okwesibini yimeko yokubheja. Izikhubekiso zineempawu ezithile zokubheja ekhasino, kwaye ezona ziqhekeza zilula zezona zinikezela ngokungangqinelani.
Kodwa i-craps ikwabonelela ngezinye zezinto ezibi kakhulu ekhasino. Kungumsebenzi wakho ukwahlula phakathi kokubini kwaye unamathele ngeebhets ezinomda wendlu osezantsi.
Lumkela iKhonkco eluKhweni
Nangona i-craps ingumdlalo endiwuthandayo ekhasino, kwaye nangona ibonelela kwezona zinto zingathandekiyo kwikhasino, kusengumbono olungileyo ukusondela kumdlalo ngocoselelo.
Umdlalo uyakhawuleza, kodwa okona kubalulekileyo kukuba, uguquguqukayo. Ithetha ntoni le nto?
Cinga malunga nokubiza-imali kubhejo. Ezo zezinye zeebhendi ezincinci eziguqukayo zekhasino. Uza kuphumelela ezo bheji ziphantse zibe sisiqingatha sexesha, kwaye xa uphumelele, uya kuphumelela nkqu nemali. Ukuba uzobe ujikelezo lweziphumo zakho kwitafile ye-roulette edlala ngokungqongqo nkqu nokubheja ngemali (njengokubomvu / mnyama), uza kubona ukuhla komgangatho.
Kwelinye icala, ukuba ubeka inani elinye kubheji kwitafile yeRoulette, uza kubona iziphumo eziguqukayo. Ilahleko yakho inokuhamba iphantse iye ezantsi, kodwa kukwakhona ispike apho ngamanye amaxesha uphumelele i-35 kuye ku-1 kwimali yakho.
I-Roulette ngumdlalo ocothayo, nangona kunjalo, kwaye ungazikhethela ukuba ufuna ukuba ngumdlalo onje.
Izikhubekiso, kwelinye icala, ngumdlalo okhawulezayo, kwaye ungabeka ukubheja ezintsha kuzo zonke roll zedayisi. Abadlali abaninzi bayathanda ukugcina ukubheja ezintathu “kusebenza” ngaxeshanye ngalo lonke ixesha besenza. Ndikhe ndabona abanye abadlali befaka imali ethe xaxe.
Ngamanye amaxesha, ezo zinto zibheji ziya kuphumelela enye emva kwenye xa umntu otyhilizayo ufika kwisiseko eshushu. Ngamanye amaxesha, ziya kuphulukana ngexesha elinye xa umntu ozitshabalalisayo engaphumi. Ke, lumka ukuba ungalahlekelwa yimali eninzi kunelo ulilindeleyo kwitafile ye-craps.
Idlalwa njani i-Craps
Itheyibhile e-craps ubuncinci kathathu ubukhulu njenge tafile emnyama, kwaye inobume obumiselweyo. Itheyibhile yokuqhekeka iphantse yafana nenye yeencindi ezinkulu ze-ashtrays owawukhe wazibona kwiminyaka yoo-1970.
Amacala asekhohlo nasekhohlo kwetafile eqhawukiyo ayalingana, ke ungabajonga “icala elinye” lomdlalo “ujongene nobabini”. Elinye icala likho phakathi kwetafile, apho kulapho ukubheja khona kwepropathi.
Ukubheja kwicala lasekunene nangasekhohlo kubhejane kulungile, nangona ezinye zibhetele kunezinye. Ukubheja embindini kuyathandeka, kodwa oko akuyekisi ukunqumama komntu ekubambiseni.
Phakathi kwabadlali abalishumi kunye neli-12 banokuhlala benyathekile kwitafile ephukileyo, kwaye bonke babheja kwinto enye-isiphumo sedayisi elijulwe ngumdubuli.
Ilayisi kunye nentshukumo
I-Craps idlalwa ngeedayisi ezimbini ezinamacala amathandathu, kwaye itotali yediphu kumadayisi amabini yile nto ichaza isiphumo somqolo ngamnye. Oku kubalulekile ukuqonda ukungangqinelani kunye nokuphumelela kumdlalo, kananjalo.
Uneziphumo ezingama-36 zedayisi, amathuba amathandathu okufa wokuqala aphindaphindwe ngamathuba amathandathu ekufeni kwesibini. Nanku umzekelo wendlela esebenza ngayo lo msebenzi.
Amandla okufumana i-12 ngu-1/65. Unokudityaniswa okukodwa, isithandathu kunye nesithandathu, oya kukunika i-12.
Njengoko unokudityaniswa okunokwenzeka kwama-36, amathuba okuba yi-1/65. Oko kunokubonakaliswa ngeendlela ezininzi. Enye indlela ethandwayo yokucacisa oko kwifomathi engathandekiyo, eyi-35 ukuya ku-1.
Ukucinga malunga nokuGqibela kwiMijikelo
Eyona ndlela yokucinga malunga nomdlalo we-craps kukuba ngumdlalo odlaliweyo kwimijikelo. Umjikelo ngamnye uqala ngokuphuma. Umjikelo uqala xa umntu onamathela enikezela omnye wabadlali iiseti ezininzi zedayisi ukuba akhethe kuzo. La ngamadayisi aya kuqengqeleka.
Ukuze ube ngumdubuli, kufuneka ubheje nokuba kudlule okanye kungadlula. Abanye abadlali etafileni banokukhetha ukubheja umgca wokudlula okanye umgca ungadluli.
Uninzi lwabadlali be-craps babheja kumgca wokudlula. Oku kuthetha ukuba ubheja nomntu otshayo kwaye unethemba lokuba uya “kuphumelela.” Intlawulo yokupasa okanye ayidlulanga iyafana, nkqu imali.
Ukuba umntu otyholayo ufumana isixhenxe okanye u-11 kumqolo wokuphuma, umgca wokuphumelela uphumelela ngokukhawuleza, kwaye umjikelo omtsha uqalisa. Musa ukudlula ilahlekile kwangoko. Ukuba i-shooter iqengqeza isibini, ezintathu, okanye u-12 kumqolo wokuphuma, umgca wokudlula uphulukana ngokukhawuleza kwaye umjikelo omtsha uqalise. Musa ukudlula ukubheja ukuphumelela kwangoko ngaphandle kokuba kuyi-12, kwimeko leyo, kuthathwe njengokutyhala.
Eliphi na elinye inani “liseta inqaku.” Amanqanaba okunokwenzeka anokubakho isine, isihlanu, isithandathu, isibhozo, isithoba, okanye i-10.
Xa inqaku lisetelwe, ujikelezo luyaqhubeka, kwaye umdubuli uyaqhubeka nokuqengqeleka ade akrole isixhenxe okanye aqengqele inombolo yenqaku kwakhona.
Ngaba ukungcakaza kwe-Smartphone Kuya Kuze Kufe?
No Comments on Ngaba ukungcakaza kwe-Smartphone Kuya Kuze Kufe?
Iifowuni ngokuqinisekileyo zezona zixhobo zokungcakaza zaziwa kakhulu namhlanje. Izigidi zabantu zibeka iwager ngeefowuni zemihla ngemihla.
Ke ngoko, kubonakala ngathi ukungcakaza kwe-smartphone kulungiselelwe ukuba yeyona ndlela ithandwayo yokwenza ukubheja kwiminyaka ezayo. Kodwa ngaba abantu baya kuze badinwe kukutshixeka ngeefowuni zabo kwaye baxhomekeke kwezinye izixhobo?
Ngokuqinisekileyo kunokwenzeka xa ujonga ukuba itekhnoloji ihlala itshintsha. Emva kwayo yonke loo nto, eyona nyaniso kunye nekhompyuter ye-holographic iya iphawuleka.
Ngaba bayathandwa ngokwaneleyo ukuba ekugqibeleni bangenise iifowuni njengezixhobo eziphambili zokungcakaza, nangona kunjalo? Ndiza kuwuxoxa lo mbandela ngokujonga indlela ii-smartphones zaziwa ngayo ekungcakazeni kwe-Intanethi kunye neetekhnoloji ezinokucel ‘umngeni ukugqwesa kwifowuni.
I-Boom ye-Smartphone yokungcakaza
Ukuza kuthi ga phakathi kweminyaka yee-1990s, ekuphela kwendlela yokungcakaza abantu ababenayo kukutyelela indawo esekwe kumhlaba.
Ukuba bafuna ukudlala imidlalo yekhasino, kuya kufuneka batyelele ikhasino yezitena nodaka. Bacingela ukuba bafuna ukudlala izandla zepoker, badinga ukuya kwigumbi le-poker elikufutshane. Ukuba banqwenela ukubeka ukubheja kwezemidlalo, babethwe yibhuki ekufutshane.
Yonke le meko yatshintsha, nangona kunjalo, phakathi kwe-1990s. Ngeli nqanaba, iicomputer zobuqu kunye (kunye nokucofa) uqhagamshelo kwi-Intanethi ziye zaxhaphaka kakhulu.
Malunga nexesha elinye, iisayithi zokungcakaza eziku-intanethi zaba yinto enokwenzeka. Ezi ndawo zazikho, kwaye zisekho, indlela ethandwayo yokwenza ukubheja ekhaya. Kodwa ingxaki, nangona kunjalo, kukuba abantu baboshwe kwi-desktop.
Iikhompyuter zeelaptop zinceda ukusombulula le ngxaki ukuya kwinqanaba elithile. Omnye unokuthatha ilaptop yabo kunye nokungcakaza kwindawo yokutyela okanye naphi na apho bafumana i-intanethi ngaphandle kwamacingo.
Kodwa iilaptops yayiziphuculo elincinci ngaphezulu komgangatho. Nangona bethatheke kakhulu kunee-desktops, ilaptop isenokuba nzima ukuba uyijikeleze.
Ngethamsanqa, ii-smartphones zeza ngo-2007. I-smartphone yayiyeyona nto iphambili ekuphuculeni iifowuni eziphathwayo ngexesha lokungcakazwa. Bavumele imidlalo yeekhasino ukuba ibaleke ngesantya esiphezulu kunye nemizobo engcono.
Njengayo nayiphi na itekhnoloji entsha, nangona kunjalo, ezi fowuni bezifuna ixesha ngaphambi kokuba zihambe kwimakethi yabathengi. Kodwa ke phakathi konyaka wama-2000s, uninzi lwabangcakazi lwalusebenzisa iifowuni ukubeka i-wager.
Abantu baqala ukuqonda ukuba ukudlala imidlalo yekhasino, ukonwabela izandla zepoker, kunye nokubheja ezemidlalo kulula kakhulu ngesixhobo esiselfowuni. Kanye njengabantu abangcakazayo namhlanje, banokonwabela ukungcakaza naphi na nangaliphi na ixesha kwaye befake izinto ezipokothweni zabo kamva.
Iifowuni okwangoku zilawula iMarike yokubheja
Akukho nto itshintshileyo ukusuka phakathi konyaka we-2000 ukuza kuthi ga ngoku ngokubhekisele kukungcakaza kwii-smartphones. Ngapha koko, abantu abaninzi bakhetha ukungcakaza ngefowuni yabo.
Ngapha koko, abantu abaninzi baneefowuni ngaphezu kwayo nayiphi na enye into. Ngaphezulu kwe- $ 1.51 yezigidi zee-smartphones ezithengisiweyo ngo-2019.
Kwakhona, ukuthwalwa sisizathu esikhulu sokuba abantu abaninzi bathenge iifowuni kunye nokungcakaza nabo. Kodwa ukusetyenziswa kweefowuni jikelele sesinye isizathu esikhulu sokuba zizizixhobo ezithandwayo.
Uninzi lwabantu alusahlali phantsi kwikhompyuter yabo kwaye lithumele ii-imeyile, zenze izithuba zemithombo yeendaba zentlalo, okanye zizalise ukuthengwa online. Endaweni yoko, konke oku bakwenza ngefowuni.
Ngenxa yokuba abantu abaninzi bexhomekeke kwezi zixhobo ngayo yonke enye into, kungokwemvelo ukuba bangcakaza nabo. Kude kufike into engcono, le meko iya kuqhubeka.
Yintoni eyenza ukuba ukugembula kwe-Smartphone kube kukhulu kangaka?
Ndigubungele ezinye izibonelelo ezibonelelwa zii-smartphones. Ngoku, nangona kunjalo, ndiza kungena kwiinkcazo zento ezenza ukuba ezi zixhobo zikhulu kakhulu ekubekweni kokubheja.
Amathuba akhoyo, awukaze ucinge ngokuthatha ikhompyuter yedesktop kwindlela yokungcakaza. Ngezi ntsuku, awungekhe uthathele ingqalelo ukwenza njalo nge-laptop.
Iifowuni zikunika lonke ubuchule be-intanethi beelaptops kunye needesika. Baqhayisa ngebhonasi eyongeziweyo efanelekileyo esandleni okanye epokothweni.
Awunangxaki yokuba uza kuyigcina phi ifowuni emva kokugqiba iseshini yokungcakaza. Kananjalo awudingi ibhegi ekhethekileyo yokuyithutha nokuba yeyiphi.
Uncedo olukhulu lokuba iicompyuter zibe ngaphezulu kwee-smartphones zongcakazo kunye nezinye iinjongo zezikrini zazo ezinkulu. Ikhompyuter eqhelekileyo inesikrini esine-intshi ezingama-21.
Iifowuni ezindala zazikhe zazininzi, zincinci kakhulu kuneeMacs kunye neePC. Ii-iPhones zokuqala, umzekelo, zinikezelwa kuphela kwiscreen esine-intshi.
Kodwa izinto zitshintshile kule meko namhlanje. I-iPhones zanamhlanje kunye neegalari zeM Samsung zibonisa izikrini ezi-5.5-intshi ngomndilili.
Ezi mboniso azikakulungeli ukuya kuthi ga koko kubonelelwa ziikhompyuter. Kodwa zenza ukuba isebenzise ifowuni ilunge ngakumbi ngeenjongo zokubheja.
Ukukhetha Umdlalo ofanayo njengeePC
Ukuza kuthi ga kwiminyaka eliqela eyadlulayo, iikhasino ezikwi-intanethi zibonelela ngokukhethwa okuncinci komdlalo kubathengi abahambahambayo. Banokubonisa imidlalo engama-300 yabasebenzisi bePC / Mac, umzekelo, kwaye ingama-20 ukuya kuma-30 imidlalo yabadlali abaselula.
Eli nqaku lalingecala elikhulu kuye nabani na ofuna ukungcakaza ngefowuni okanye ngethebhulethi. Ngethamsanqa, iikhasino zitshintshe kakhulu kule meko.
Indlela Yokuziva NjengoPro kwiKhasino (Nokuba iliLungelo lakho lokuQala)
Uyenza njani iKhuphiswano lweMidlalo yeKhasino kunye neKhuphoni
Ngaba uHlobo lweMigca lusebenza kuMndilili kaJoe?
Imidlalo yeMarble kunye nokungcakaza
Iimpazamo ezi-7 zabahambi baseLas Vegas benza yonke imihla
© 2020	CYMRU